राप्ती गाउँपालिकामा सडक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन गौरवका योजना | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / राप्ती गाउँपालिकामा सडक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन गौरवका योजना
राप्ती गाउँपालिकामा सडक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन गौरवका योजना
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता September 12, 2018	0 169 Views
अध्यक्ष– राप्ती गाउँपालिका, दाङ
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारले दुईवटा बजे ट तथा कार्यक्रम ल्याइसके का छन् । एक वर्षको कार्यकाल अनुभवमा बिते को बताउनुहुने राप्ती गाउपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवे दीले पाच वर्षभित्र राप्ती गाउपालिकालाई समृद्ध गाउपालिकाको रुपमा विकास गर्ने संकल्प लिनुभएको छ । राप्ती गाउपालिकाको गौ रवका यो जनाहरु के हुन् ? एक वर्षे अनुभव र भावी यो जनाबारे युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले राप्ती गाउपालिकाका अध्यक्षसग गरे को कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
एक वर्षको आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
जनतालाई विकास निर्माणदे खि सबै विषयमा चित्त बुझाउने भने र निर्वाचित भएका हामीले जनताको से वा गर्नै पर्छ । एक वर्षको पहिलो परीक्षण भने को जनतालाई से वा सुविधा दिन, संघीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो वडामा वडा कार्यालय स् थापना गर्नु थियो  । वडा कार्यालय स् थापना गरियो  । त्यहा“बाट से वा दिन थालियो  । भालुबाङ र सिसहनियामा मात्रै स् वास् थ्य चौ की थिए । त्यतिले मात्रै जनताले पायकमा, आफ्नो घर–घरमा, विपन्न वस् तीमा उनीहरुले स् वास् थ्य से वा पाएनन् भन्ने भएको कारणले तीनवटा स् वास् थ्य के न्द्र स् थापना गरिएको छ । दे वीको ट, पत्थरगढवा र अकोर् वडा नं. ३ र ४ को बीचमा पनेर् मौ रीघाटमा स् वास् थ्य से वा के न्द्र स् थापना गरे र से वा शुरु भएको छ । जनतालाई स् वास् थ्य से वा सुविधा दिने तर्फ लागियो  । यो वर्ष भने को विकास निर्माणको वर्षको रुपमा लिएका छौ ं । सबै को चाहना सबै भन्दा बढी निर्वाचनको क्रममा जनतालाई भे ट्ने बे ला पूर्वाधार विकासकै कुरा बढी आएको थियो  । मे रो घरको नजिक खाल्डो छ । हिलो छ भन्ने कुराहरु थिए । त्यसकारण सबै ठाउ“मा वाटो घाटो बनाउने तर्फ लागियो  । गत वर्ष के ही शिक्षाका कामहरु भए । के ही स् वास् थ्यका काम भए । कृषि, पशुका कामहरु भएका छन् । सामान्य तरीकाले भए । बढी भएको भने को भौ तिक पूर्वाधारको विकास नै भएको हो  ।
दे श संघीयतामा प्रवे श गरे सगै बने को स्थानीय सरकारको ने तृत्व सम्हाले र काम गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो ?
पहिलो वर्ष अनुभवकै वर्ष रह्यो  । विकास निर्माणको जग बसाल्ने दे खि जनतालाई के न्द्रमा राखे र ऐ न, कानून बनाउने क्रममा धे रै अनुभव प्राप्त भएको छ । अनुभव अनुसार काम गर्न सक्ने हरुलाई राम्रो पनि छ । नसक्ने हरुलाई अलिकति अफ्ठे रो पनि छ । त्यसै ले पहिलो वर्ष अनुभवकै वर्ष हो  ।
यो एक वर्षमा के गर्न सकियो जस्तो लाग्छ ?
गर्न बा“की थुप्रै छ । नागरिकहरुले के सो च्नु भएको थियो भने , २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि आउ“दा हाम्रा सबै इच्छा आकांक्षाहरु पूरा हुन्छन् भन्ने । छ पनि । सबै कुरा एकै चो टि परिपूर्ति हुन सक्दै न । विस् तारै –विस् तारै जनताका आवश्यकताहरु पूरा गनेर् तर्फ लागे का छौ ं । नीति कार्यक्रम बनाएर अघि सरिरहे का छौ ं । सबै कुरा एकै चो टि हु“दै नन् । जनतालाई एकै चो टि हुन्छ भन्ने आश थियो  । त्यो परिपूर्ति नभएको हो ला । तर, हामी विस् तारै विस् तारै गछौर् ं । एक वर्ष भन्ने हो भने ठ्याक्कै भौ तिक पूर्वाधारतर्फ बाटो घाटो धे रै ठाउ“मा निर्माण गरियो  । सडकमा हुने हिलो र धुलो कम गर्न सफल भएका छौ ं । पहिलो वर्ष मर्मत गरिएका सडकहरुमा कालो पत्रे र नाली निर्माणको काम गरिने छ । शिक्षातर्फ सबै को ठूलो आशा थियो  । ने पाल सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने थियो तर बजे ट नदिने थियो ।
गाउपालिका भएपछि गाउ“पालिकाको जिम्मा भने पछि त्यसतर्फ लाग्नुप¥यो  । कृषि क्षे त्रको पनि ठूलो आधार छ । यो दे श कृषिप्रधान दे श हो  । स्थानीय सरकार गाउघरको सिंहदरवार भन्ने आशा पनि छ । सा“च्चै पनि हो  । संघीयताको मर्म अनुसार त्यो भएको पनि छ । कृषकहरुलाई पनि ठूलो आशा छ ।
कृषिअन्तर्गत पशु पालकहरुलाई पनि छ । विपन्न वस्तीमा बस्ने सबै समुदायका मानिसहरुलाई पनि आशा छ । ज्ये ष्ठ नागरिकहरुलाई के आशा छ भने हामी आ“खा नदे ख्ने भएका छौ ं । हात खुट्टा दुख्ने भएका छौ ं । हामीलाई से वा सुविधा सरकारले अवश्य दिन्छ । सरकारले अवश्य हे र्छ भन्ने छ । यी कुरातर्फ ध्यान दिन लागे का छौ ं । हुदै जान्छ ।
राप्ती गाउपालिकाको आफ्नै गौ रवको यो जना के हो ?
राप्ती गाउ“पालिकाको गौ रवको यो जनामा राप्तीको चक्रपथ भने र छुट्याएका छौ ं । पाचवटा बाटो हरुको डिपिआर हु“दै छ । चक्रपथलाई राजमार्गसग जो ड्ने उत्तर दक्षिणका सडकहरु हुन् । त्यो भयो भने विपन्न वस् तीका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइले, आ–आफ्ना उत्पादित वस् तुहरुलाई बजारमा ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने  ।
त्यहा“बाट स् याना ट्याम्पुहरु भए, माइक्रो वसहरु सञ्चालन भएर आ–आफ्नो घरमा जान सक्ने  । भने को समयमा पुग्न सक्ने  । बाटो नबिग्रने खालको पक्की बाटो बनाई दिन सक्यो भने धे रै राम्रो हो ला । यहा“ सबै भन्दा पहिलो कुरा जे भने पनि विकासको पूर्वाधार भने को बाटो नै हो जस् तो लाग्छ । गाउ–ठाउमा जुनसुकै विकास गर्न यो पूर्वाधार विकास अन्तर्गत बाटो भएन भने कुनै उद्यो ग खो ल्न पनि सकिन्न । भएका चिजहरु बजारीकरण गर्न सकिदै न । त्यो ठाउमा पुग्न पनि सकिदै न । ल्याउन पनि सकिदै न । त्यो स“ग स् वास् थ्य पनि जो डिएको छ । विपन्न समुदायका मानिसहरुलाई उपचारका लागि जान सडक चाहिन्छ । अकस्मात अस्पताल लै जानुपरे मा एम्बुले न्स जान आउन सक्ने बाटो भएमा सजिलो हुन्छ । यी कुराहरुलाई अति संवे दनशीलरुपमा लिएका छौ ं । त्यही भएर पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । त्यसपछि स् वास् थ्यलाई प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । स् वास् थ्य के न्द्र स् थापना गर्न लागियो  । यो वर्ष शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । कृषितर्फ पनि प्राथमिकता दिएका छौ ं । चारवटा पर्यटकीय स्थलको डिपिआर बनाउन बजे ट विनियो जन भएको छ । अनि राप्तीको करिडो र निर्माण गर्ने कुरा छ । हाम्रो राप्ती गाउ“पालिकाका यी यो जना गौ रवका हुन् ।
चुनौ ती के रहे ?
पहिला–पहिला त चुनौ तीहरु सो झै हुन्छन् । हामी पनि त्यतिका अनुभवी दिएनौ ं । एउटा अप्ठे रो कुरा के भयो भने विकास निर्माण गर्दा लागत सहभागिताको रकम राख्नै पर्छ । कि २० प्रतिशत जनश्रमदान कि २० प्रतिशत रकम लागत सहभागिताको जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने नियम बनाइयो  । कार्यान्वयन गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो भयो  । पछि लास् टमा गएर उपभो क्ता समितिको तर्फबाट लागत रहभागिताको रकम उठाउन सके नन् । उठाउन नसके पछि उपभो क्ता समितिको रकम कटौ ती गर्नुपर्ने नीति नियमले बाध्यता भयो  । त्यतिबे ला धे रै जस् तो असन्तुष्टि अलि चुनौ ती जस् तो भयो नबुभ्mदा । तर पछि बुझिसके पछि यो पै सा कहीं जान्न, को षमा आएर बस् ने हो  । पुनः विकासमा जान्छ । यो कसै ले खाएको पै सा हो इन । लाएको पै सा है न । तपाइहरुले कार्यान्वयन गर्न नसके को पै सा हो भने पछि ठीकै ठीकै भएको छ । नया कार्यक्रम लागु गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नै  । सबै स“ग सहकार्य गरे र, सहमति गरे र अप्ठ्याराहरुको समाधान गर्ने हो  । सबै साथीहरुलाई सो धे र, समे टे र वास् तवमा यस्तो हो भने र सबै को सहमतिबाट भयो  । म भन्ने भावना नराखे र हामी भन्ने भावना राख्यो भने सबै कुराहरु हुन्छन् । स् थानीय तहमा कर्मचारी नहुदा समस्या हामीले पनि भो ग्यौ ं । प्राविधिकबाट वडा सचिव चलाएका छौ ं हामीले  । धे रै कुराहरु अहिले पनि अप्ठ्यारा छन् । तीनवटा वडाहरुमा प्राविधिकबाटै वडा चलाएका छौ ं । इञ्जिनियर, ओ भरसियरहरु ज्यालादारीकै रुपमा चलाइयो  । माथिबाट फूलफिल दिइएको छै न् । अब ती कुराहरु परिपूर्ति भए भने अलि सजिलो हो ला । अनि सबै शाखाहरु स् थापना गर्दा भौ तिक निर्माणको लागि घरहरु थिएन । घर बनाउनुप¥यो  । बनाउदै छौ ं अझै  । पा“च वर्ष हाम्रो अनुभवमै बित्ला जस् तो लाग्छ मलाई । विस् तार–विस् तार गर्दै जाने हो  । सके सम्म सो चे र बुझे र स् थानीय भद्र भलाद्मी बुद्धिजीवीहरु, पुराना जनप्रतिनिधिहरु, बुढापाकाहरु सबै लाई सो धे र अघि बढ्ने हो  । अब यो करकै कुरा छ । कर लगाउने कुरामा हामी सबै सित परामर्श गरे र लागु गर्ने हो  । हामीकहा“ अबदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने हो  ।
एकीकृत सम्पत्ति कर भने को ५७६ वर्ग फिटलाई घर भने को क्षे त्र माने र र घरको मूल्यांकन सहित त्यसलाई एकीकृत सम्पत्ति करमा जाने भयो अब । अन्य जग्गाहरु मालपो त कर नै हो । थो रै हुने ले थो रै तिर्ने , धे रै हुने ले धे रै तिर्ने हो  । स् थानीय स्रो त साधनबाट आउने करहरु भएन भने विकास निर्माणमा टे वा पुग्दै न । आफूले उठाएको करबाट आफ्नै गाउ“ बनाउने हो  । आफ्नै ठाउ“ बनाउने हो  । त्यसको लागि को ही आत्तिनुपर्दै न । धे रै गराउने , थो रै गराउने भने को हामी स् थानीयको जिम्मा हो  । कति गराउने भन्ने विषयमा स् थानीय सरकार, स् थानीयवासी, राजनीतिक दल, भद्रभलाद्मी, बौ द्धिक विज्ञ सबै को सल्लाहले गराउने हो  । है न ने पाल सरकारले तो क्यो , तो के अनुसार हामी चाहि‘ यो गरे का हौ ं भने र भन्न पनि बन्दै न । च्याट्टै दिन्न पनि भने र बन्दै न । सामान्यतया पहिलो वर्ष एउटा शुरुवातको वर्ष हो  । पछि सम्पूर्ण नागरिकहरुले बुझ्दै जानुहुन्छ । अलि–अलि कर बृद्धि हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । हु“दै जा“दाखे रि सबै लाई बानी पर्ने हुन्छ । त्यो चाहि“ हामीले दिएको करले हाम्रै गाउ“ ठाउ“को विकास भएको छ भन्ने हुन्छ ।
अबको पाच वर्षमा कहा पुगिएला ?
पाच वर्षभित्र पूर्वाधार विकासमा धे रै सडकहरुलाई सवलीकरण गछौर् ं । हामीले सडकको गुरुयो जना बनाएका छौ ं । पर्यटनको गुरुयो जना बनाएका छौ ं । शिक्षाको यो जना बनाएर प्लानअनुसार जाने छौ ं । हामी विस् तारै –विस् तारै सो चे अनुसार प्रगति गर्ने तिर लागिराखे का छौ ं । गाउ“पालिकालाई राम्रो बनाउदै प्रगतिमा लै जाने सो चमा छौ ं । ने पालको सबै भन्दा धे रै जनसंख्या भएको गाउ“पालिका हो यो  । राम्रो गाउपालिका बनाउन सबै को ध्यान छ । म पनि लागिरहे को छु । बिहान ६ बजे दे खि कहिले काहीं त बे लुका ७ बजे ८ बजे सम्म यही गाउ“पालिकाको काममा खटिएको छु ।
Previous: मतदाताको अपमान हुने चर्चा चल्नु दुःखद्ः रोका
Next: बाढीपीडितलाई सहयोग